DHACDO XANUUN BADAN: Maxaa ka dhacay kulankii dhawaan ee Leicester City iyo Burnley??…+SAWIRRO – Gool FM
DHACDO XANUUN BADAN: Maxaa ka dhacay kulankii dhawaan ee Leicester City iyo Burnley??…+SAWIRRO
(England) 10 Nof 2018. Leicester City ayaa dhawaan ku ciyaartay garoonkeeda King Power markii ugu horreysay tan iyo Musiibadii ku habsatay Milkiilaheeda Vichai Srivaddhanaprabha bishii la soo dhaafay kaa oo geeriyooday kaddib markii ay la bur burtay Helicopter-kiisa oo markaa ka soo kacday garoonka kaddib ciyaartii ay la yeesheen West Ham.
Naadiga lagu naaneyso Foxes ayaa bar baro goolal la’aan ah mininkeeda kula gashay Burnley iyadoo ay taageerayaasha Baroor diiq u sameeyeen milkiilahooda iyo shaqaalihii kale ee ku dhintay Helicopter-ka. Balse waxaa kulanka laga qabtay Sawirro Xanuun badan.
Wiilka Milkiile Srivaddhanaprabha ee Aiyawatt Srivaddhanaprabha ayay Kaamirooyinku soo qabteen isagoo si Murugo leh u eegaya booskii uu fariisan jiray Aabigii geeriyooday oo Banaan oo aysan cidina fadhin.
Aiyawatt ayaa dhinac fadhin jiray aabihii kulamada ay Leicester ku ciyaarto King Power balse caawa wuu waayay garabkiisa, isagoona ilinta ceshan waayay mar ay taageerayaasu xusayeen aabihii.
BAL EEG: Sida uu iska dhigay Sergio Aguero ka hor kulanka habeen dambe ee Manchester Derby
HORDHAC: Liverpool v Fulham